လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည် Hypothalamic Androgen Receptor Immunoreactivity (2003) ကိုလျှော့ချပေးသည် - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Hypothalamic အန်ဒရိုဂျင် receptor Immunoreactivity (2003) ကိုလျှော့ချပါ
ထင်မြင်ချက်များ: Testosterone အဆင့်ဆင့်တဦးတည်းသုတ်ရည်ထိအတူသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှသုတ်ရည်ထိအတူကွဲပြားကြဘူး။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှသုတ်ရည်လွှတ်နေသည် ဆက်နွယ်နေကြောင်း ဦးနှောက်အန်ဒရိုဂျင် receptor များအတွက်ရေစက်ရန်။
Fernandez-Guasti A, Swaab : D, Rodriguez-Manzo G.
Psychoneuroendocrinology. 2003 May;28(4):501-12.
ဌာန Pharmacobiology, CINVESTAV, Calz။ အ အ Tenorios 235, ဗိုလ်မှူးကြီး Granjas Coapa, မက္ကဆီကို 14330 DF, မက္ကဆီကို။ jfernand@mail ။cinvestav.mx
အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် limbic အဆိုပါ medial တူသောဒေသများ preoptic နျူကလိယ (MPN), အ stria ၏အိပ်ရာနျူကလိယ terminalis (BST), အနျူကလိယ accumbens (NACC) ပြီးနောက် ventromedial hypothalamic နျူကလိယ (VMN) ။ ထိုအဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်အာရုံခံအန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) တွင်ငွေရတတ်သောသူများမှာ နှင့် FOS- ဖော်ပြimmunoreactivity မိတ်လိုက်ရန်တုန့်ပြန်ပါ။ မျိုးစိတ်များစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးနေတဲ့ပြည်နယ်, မျိုးစုံသုက်ပြီးနောက်မှီနေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation အခြေခံအဆိုပါယန္တရားများအကြီးအကျယ်ကိုမသိရှိပါ။ ဒီလေ့လာမှုမှာ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအန်ဒရိုဂျင် receptor လျော့နည်းစေကြောင်းကိုပြသ immunoreactivity (အန်ဒရိုဂျင် R ည့်ကြိုများ -ir) အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးနှောက်ဒေသများအချို့အတွက်မဟုတ်ဘဲအခြားသူများကိုအတွက်။ ထို့ကြောင့်တဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သည့် AR- လျှော့ချir အဆိုပါ MPN နှင့် NACCဒါပေမယ့်မ BST နှင့် VMN ၌တည်၏။ satiation မှသုတ်ရည်ထိ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, AR- လျှော့ချir အဆိုပါ MPN အတွက်, NACC နှင့် VMN နှင့်မ BST ၌တည်၏။ အဆိုပါ AR-ir တစ်ချိန်က ejaculating တိရစ္ဆာန်များ၏ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာလိင်ဝကြွက်များ၏ MPN အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလျှော့ချရေးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သွေးရည်ကြည်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ်သုတ်ရည်ထိပြီးနောက်ကွဲပြားကြဘူး။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်အန်ဒရိုဂျင် receptor လျော့နည်းစေကြောင်းထုတ်ဖေါ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလျှော့ချရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးအခြေခံသောဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုအပ်ပါသည်။